Ukuze ekhaya noma farmstead ukudayiswa zizalela amadada - ngempela ibhizinisi inzuzo. Bakha ezintathu izinhlobo imikhiqizo main: inyama, amaqanda, izimpaphe nokuningi - udoti.
Ukuze uqale ibhizinisi, udinga ukuthenga amaqanda noma amaphuphu. Ungagcina ukuthenga yakamuva, kodwa ungakwazi uzitholele ngokwakho ku egcekeni lakho. Chick duck Babukeka babahle kepha mine ngokuthi. Anakho ukusebenza okuhle, precocity kanye unpretentiousness.
Popular zohlobo yokuzalanisa
black white breast;
Uma umlimi wathenga iqanda, uzodinga nanesikhukukazi (hen) elimelele elithi noma incubator. Kuyinto elula kakhulu kulabo uhlela ukwethula inyoni ngoba inyama e isikali medium noma enkulu. The best intando bayashintshana ekufukameleni amaqanda lain emva laying izinsuku elingekho ngaphezu kuka 10, ifomu flat, ubukhulu ezimaphakathi uhlobo inikezwe.
Indlela ukuya kusuka amaphuphu futhi ukuchamisela ekuhlatshweni
Isikhathi kwesikhathi bayashintshana ekufukameleni izinsuku 27-28. Isikhawu nesikhathi mayelana usuku olulodwa ngaphambi Ukuchamisela ngokuthi PP. duck nestling sikhathi esinzima ukuze ifohle igobolondo ngoqhwaku lwayo engezwa. Kubalulekile ukuba eduze amadada nalapho sebefike ukukhanya, njengoba zichanyuselwa ezimanzi, kanye nokubuthelwa empini kancane iba ebulalayo ngabo. Duck izingane kumele omisiwe okwenziwe noma uyinike isikhukhukazi sishiya amachwane aso.
Khulisa amadada kungaba ngaphansi inyoni omdala - xin - noma ngokwehlukana. Yiqiniso, indlela yokuqala kungcono, kodwa duck iphuphu incubator azizimbi ngokwedlulele ngoba izimfanelo elikhiqizayo. Kuyinto kudingekile kuphela ukuthatha ezinye ubuqili ku-akhawunti:
amagceke yenkukhu kufanele abe lokushisa njalo kanye nomswakama, nakuba amadada Waterfowl, kodwa dampness endlini akufanele kube. lokushisa Air ngosuku 6th - 22-28 o C ke - 16-18. Substrate for amadada kufanele kube elomile efudumele, sebenzisa utshani, Peat kanye sawdust.
amadada elisafufusa, kanye nanoma yimuphi omunye yenkukhu, kakhulu ukuzwela uma hypothermia. Kufanele usebenzise kuphuzwe nezitsha esikhethekile amadada, ngakho musa manzi.
Isikole emanzini ekhiqizwa umhla Nzalo Simila ngaphansi hen: ngokuvamile 18-25 izinsuku.
Kuyadingeka ukuba abale ubukhulu egumbini hhayi ukuba phaka inqwaba amaphuphu ndawonye: duck awukwazi ukubekezelela abasondelana. Kuyinsakavukela kuyinto 7-8 izilwane ngamunye imitha square.
Kuhlatshwa inyama akhiqizwa izinyanga ezimbili, isisindo ezisencane 2200-2500, ngemva kwezinyanga ezimbili, le nyoni uqala molt, amadada ulahlekelwe isisindo at ekuhlatshweni isisindo kuyoba ephakeme, kodwa kancane inyama isivuno.
Duck izingane ngempela elinganeliseki, buyela ukudla esebenza ngogesi kudingeka 3-4 amahora. Ukudla kwawo kuhlanganisa of okusanhlamvu meshanok, okusanhlamvu (oat, ukolweni, ibhali) ubisi, cottage shizi, imifino, utshani obuluhlaza basha baqothuka. Mineral ibhekwa ngesimo amagobolondo olwembiza, wokulinganisa, amathambo sakusihlwa, futhi amasonto amathathu - usawoti - liyadingeka. Amadada ezinsukwini zokuqala zokuphila engeza oqoshiwe amaqanda abilisiwe.
Ubulili ukuzimisela amadada
Ukuze uthole ukuthi bobulili we duck iphuphu, kubalulekile ukubheka cloaca, ngesikhathi Drake esigabeni yayo aphansi kungabonwa a Bump encane. Ducks ungabahlukanisa phansi cishe ngokushesha emva kokuzalwa. Ezinye zinhlobo besifazane kanye nabesilisa kuhluke umbala.
Izinyosi: incazelo Izinyosi zohlobo, izici kanye nemikhiqizo ukufuywa
Emazweni Agricultural: umqondo, isakhiwo, ukusetshenziswa
Ukutshala izinhlobo ze-anyanisi Exibishen: izincomo ezithile
Izidlo kusuka corn oluthile lokudla - ukudla okwehla esiphundu futhi unempilo
Umkami nge amakhowe
Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe ukususa UEC? Ngingaba ukuphuma UEC?
Indima ukudlala imidlalo ezasenkulisa
I-Mordovian Autonomous Soviet Socialist Republic eminyakeni ye-Great Patriotic War
Ungayenza kanjani isidlaliso sombala ku- "DotA 2" usebenzisa i-Notepad?
Ucingo Inthanethi Yota. Finyelela iphuzu: nokuxhuma ukumisa
Verdure: ukutshalwa kanye nezici zayo